စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 5:12 AM
ဒီနှစ်မီးမီးရဲ.မွေးနေ့ကတော.တကယ့်ကိုအမှတ်တရပါပဲ။အရုပ်မရပေမယ်. အရုပ်တွေတော. ကြိုက်နေသေးတုန်းပါပဲမေမေရေ။မေမေ ဒီနှစ်ပေးတဲ.မွေးနေ.လက်ဆောင်ကိုလွန်ခဲ.တဲ.၂နှစ်လောက်ကရခဲ.တဲ. POOHွှရုပ်ကြီးထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဘာပဲ
အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါပဲ..။ မိဘနဲ့ သားသမီးတွေ ဒီလိုမျိုး နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ တရားအသိတွေ ဝေမျှပေးတာကို ဖတ်ရတော့ အမေ့ကိုလည်း သတိရမိပါတယ်..။ ညီမလေး စုမြတ်ရတနာလည်း မိဘကို ဓမ္မနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ သမီးကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါတယ်..။ ညီမတစ်ယောက် မွေးနေ့မှသည် ဘ၀ကို စိတ်ချမ်းသာစွာဖြတ်သန်း၍ ဓမ္မနဲ့ ပျော်မွေ့နိုင်တဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ..။ အန်တီသစ္စာအလင်းလည်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ...။
အင်မတန် မွန်မြတ်တဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါပဲ..။ မိဘနဲ့ သားသမီး ဒီလိုမျိုး တရားအသိလေးတွေ မွေးနေ့မှာ ဝေမျှပေးတာ မြင်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးမိပါတယ်။ မိဘကလည်း သားသမီးကို.. သားသမီးကလည်း မိဘကို အပြန်အလှန် တရားအသိတွေ ဝေမျှပေးနေလို့ရှိရင် ဒီလိုမျိုး မိသားစုတွေရဲ့ဘ၀ဟာ တရားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အေးချမ်းတဲ့.. ငြိမ်းအေးတဲ့ မိသားစုဘ၀လေး ဖြစ်နေမှာပါ။ ညီမလေးစုမြတ်ရတနာလည်း မွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ မိဘကို ဓမ္မနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ အန်တီသစ္စာအလင်းရော.. ညီမရော ဓမ္မနဲ့ ပျော်မွေ့နိုင်ပြီးတော့ မိမိရည်မှန်းရာ ပန်းတိုင်ကို ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ....။
ဆုတောင်းမေတ္တာအတွက်--ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သား ကိုကောင်းရေ..။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အန်တီရေ။ ရင်ထဲမှာ နွေးထွေးမှုနဲ့ မေတ္တာတရားတွေကို ခံစားခွင့် ရလိုက်သလိုပဲ။ ဖေဖေ နဲ့ မေမေ့ကို လွမ်းလာတယ်။